के तपाई यो हल गर्न सक्नुहुन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
के तपाई यो हल गर्न सक्नुहुन्छ ?
गणितमा केही यस्ता प्रश्न हुन्छन, जुन देख्दा सामान्य लाग्छन तर ती हल गर्दा पनि कतै न कतै गल्ती हुने गर्दछ ।
यहाँ एउटा यस्तै प्रश्न दिइएको छ । यो प्रश्न हेर्दा निकै सामान्य लाग्छ ।
ल, पहिला तपाई यो प्रश्न हल गर्नुस् त ।
याे पनि पढ्नुस ल भन्नुस ८÷२ (२‌+२)= कति ? संसार नै बाँडियो यो प्रश्नमा
यो प्रश्न जापानमा निकै भाइरल नै भएको टेलिग्राफले जनाएको छ । सन् १९८० को दशकमा गरिएको एउटा अध्ययनमा यो प्रश्नको सही उत्तर ६० प्रतिशतले मात्रै दिन सकेका थिए । जबकि यो अहिले भने यो प्रश्नको उत्तर ९० प्रतिशतले गलत गरेका छन् ।
के गल्ती हुन्छ त ।
कतै तपाईले पनि यो चित्रमा दिइएको जस्तो गल्ती त गर्नु भएन ?
कति उत्तर आयो भन्नु त ?
यसमा पनि कतिपयले बोडोमास नियम लागु गर्ने गर्दछन् ।
यो भिडियो हेर्नुस् त
ट्याग्स: math puzzle, math quiz, Math tricks